Imikhiqizo ye-SPL esebenzela Imboni Yeziqandisi
Ngaphandle kwesiqandisi bekungeke kwenzeke ukujabulela izithelo nemifino yesizini entsha unyaka wonke. Ngaphandle kwesiqandisi asikwazi ukucabanga ukuthi intuthuko yenzeke emkhakheni wezokunakekelwa kwezempilo womhlaba wonke, owezentengiselwano, owezimboni, owezokuhlala nowokungcebeleka osindile.
Ngenani labantu elikhulayo nemikhuba yokudla eguqukayo, ukwenza ngcono ukusebenza kwamandla kagesi kwemishini yefriji yezohwebo neyezezimboni kubalulekile kumakhasimende afuna ukunciphisa izindleko zokusebenza. Lokhu kuyinto ebaluleke kakhulu embonini yokulungisa ukudla, lapho imikhawulo yenzuzo incane.
Izinhlelo ze-SPL Evaporative Condenser kanye ne-AIO Package Refrigeration ziletha ukusebenza okuphezulu nokusebenza okuthembekile kumakhasimende ayo okonga imali enkulu.
Kwa-SPL, singochwepheshe ekwakhiweni okwenziwe ngendlela oyifisayo, okusekelwa yiminyaka emisha kanye nokusebenzisana okusondele namakhasimende ethu nezikhungo zocwaningo. Senze izixazululo ezihola phambili ezimakethe ezinhlobonhlobo zezicelo, kusuka kuDeri, Ukudla kwasolwandle, Inyama, nezinye Izithelo nemifino yokulungisa imifino.